३९ वर्षदेखि त्यही फुटपाथमा ग्राहक कुर्दै लक्ष्मी ! access_timeअसार ११, २०७८
उमेरले ५२ वर्ष नाघ्यो । अनुहारका छाला चाउरिएका छन् । जवानी पूरै फुटपाथको व्यवसायमै बित्यो । एउटा सटर लिएर व्यवसाय गर्ने रहर अझै पूरा भएन । तर अनुहारका हरेक धर्सामा सङ्घर्षको कथा झझल्किने उनको मनको उत्साह भने कति पनि चाउरिएको छैन । यता उता हेर्छिन्, ग्राहक आएको देख्ने ...
सेयर कारोबार जस्तै बिजुली कारोबार, हरेक १५ मिनेटमा फरक मूल्य ! access_timeबैशाख १९, २०७८
नेपालले भारतीय उर्जा एक्सचेन्जसँग सेयर कारोबार गरेजस्तै गरी विद्युत कारोबार गर्न थालेको छ । नेपालले भारतीय उर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत व्यापारका लागि प्रवेश पाएसँगै विडिङ सिस्टमबाट सस्तोमा विद्युत आयात गर्ने बाटो खुलेको हो । हरेक १५ मिनेटमा बिजुलीको दर फरक हुनेछ । ...
स्थानीय तहमा कोरोनाको नाममा व्यापक अनियमितता : खर्च देखिन्छ, काम देखिँदैन ! access_timeबैशाख १४, २०७८
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को नाममा स्थानीय तहहरुमा अनियमितता थप बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । स्थानीय तहहरु अनियमितताको अखडा बनेको यसअघि कै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको थियो । तर, यस पटक अनियमितता गर्...
अर्थतन्त्रमा भयावह जोखिम देखियो : अर्थविद् access_timeबैशाख १४, २०७८
लकडाउनले देशको अर्थतन्त्रमा दिएको चोट निको नहुँदै निषेधाज्ञामा जाने अर्को निर्णय भएको छ । यसले व्यापार व्यवसायदेखि देशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई रोगी बनाउने भन्दै अर्थविदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बौरन थालेको अर्थतन्त्र पुनः रोगी बन्ने विश्लेषण अर्थविद्हरुको छ । को...
आधा दर्जन बैङ्कको नाफा अर्बभन्दा माथि, कुन बैङ्कको वित्तीय अवस्था कति बलियो ? access_timeबैशाख १३, २०७८
बैङ्कहरूले नाफा कमाएको वित्तीय विवरण धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (२०७७÷७८) को नौ महिनामा (साउनदेखि चैतसम्म) वाणिज्य बैङ्कहरूले नाफा कमाएका छन् । कोरोना महामारीका बीचमा पनि वाणिज्य बैङ्कका अधिकांश सूचकमा राम्रो प्रगति देखिन्छ । हालसम्म आधा दर्...
प्रधानमन्त्री ओलीका दुई अलपत्र सपना access_timeबैशाख १२, २०७८
‘नबुझ्ने मान्छेले अलिक समय पानीको बाल्टीमा कागज हालेर उडाउँछन्, हेर्दाहेर्दै कोसी, गण्डकी र कर्णाली स्टिमरबाट जान्छौँ । हाम्रो ढुवानी हुन्छ, हाम्रो रेल, हाम्रो ट्रक, हाम्रो पानीजहाज मजाक उडाउने विषय हो र ? पानीजहाज निदाएको बेला होइन, बिउँझेको बेला भनेक...
न प्राविधिक जनशक्ति न पूर्वाधार, प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रम उद्घाटन गर्नै हतार access_timeबैशाख ८, २०७८
गत फागुन अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘किसान सूचीकरण’ राष्ट्रिय अभियान सुरुवात भएको घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले केहीदिन अघिमात्रै ‘मेरो कित्ता’को पनि उद्घाटन गरे । तर, यी दुवै अभियान पूरा गर्न प्राविधिक जनशक्तिदेखि पूर्वाधार...
अन्तिम तीन महिनामा हुने खर्चको जालोलाई अर्थमन्त्री पौडेलले पनि तोड्न सकेनन् access_timeचैत ३०, २०७७
असोज २९ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुने गरी काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनको ध्यान नै पुँजीगत खर्च कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने थियो । तर न त उनको निर्देशनअनुसार खर्च भय...
नेताजस्तै उद्योगपति ! : ‘घोषणापत्र’ बन्यो, कार्यान्वयनमा शंका access_timeचैत ३०, २०७७
‘एक वर्षमा एक हजार उद्योग स्थापना गरिनेछ । ५ वर्षमा ४.३ अर्ब डलर निर्यात पुर्‍याइनेछ । २२ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पुर्‍याइनेछ । १५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ ।’ यो कु...
जनमत बटुल्ने बजेट बनाउन दबाब ! access_timeचैत २८, २०७७
सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको बेलामा अर्थ मन्त्रालय भने बजेट तयार पार्ने चटारोमा छ । राजनीतिक अस्थिरताकै बीच वर्तमान सरकारले जनमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्तामा वृद्धि, कर्मचारीलाई खुसी पार्ने, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताल...
वृद्धभत्ताको बहस : ५ हजार पुर्‍याउँदा साढे चार अर्ब भार थपिने access_timeचैत २६, २०७७
काठमाडौं । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा बोल्दै आगामी बजेटमा सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने बताए । आफूले वृद्धभत्ता बढाउँछु भन्दा त्यसको विरोध हुने र सरकार ढाल्ने खेल शुरु हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले आफ्न...
अधिकांश मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घट्यो (१० मन्त्रालयको सूचीसहित) access_timeचैत २३, २०७७
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नै अधिकांश मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक बर्षको भन्दा कम बजेट सिलिङ दिएपछि कतिपय मन्त्रालयलाई नियमित कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सकस परेको छ । योजना आयोगले अनिवार्य खर्च धान्नै नपुग्ने सिलिङ पठाएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवार...
अर्थमन्त्री पौडेल बिहानै मन्त्रालय पुग्छन्, भनसुन गर्नेको सिंहदरबारमा लर्को access_timeचैत २०, २०७७
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दैनिकी पनि अचेल फेरिएको छ । उनी बिहान ८ बजे नै मन्त्रालय पुग्छन् । अर्थका केही कर्मचारीहरुको टोली पनि बिहानै मन्त्रालयमा पुग्छ । बजेट निर्माण ग...
दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र ‘बाउन्स ब्याक’ ! access_timeचैत १९, २०७७
दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा सुधारको लहर देखिन थालेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२१ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ र २०२२ मा ४.४ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एसियाले आफ्नो विकासको ऐतिहासिक दर सन् २०२२ मा पुनः प्राप्त गर्ने देखिएको छ । यसको ...
डलर कार्डका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य, कसरी लिने, कति लाग्छ खर्च ? access_timeचैत १८, २०७७
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रिपेड कार्डमार्फत ५ सय डलरसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न सक्ने बनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएसँगै बैंकहरुले धमाधम डलर कार्ड जारी गर्न थालेका छन् । विभिन्न नाममा जारी भएको प्रिपेड कार्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तो...
एमालेमा व्यापारीको प्रवेश : पार्टीमोह कि निजी स्वार्थ ? access_timeचैत १३, २०७७
गतसाता उद्योगपति मोतीलाल दुगडको पहलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उद्योगी–व्यवसायीहरु जम्बो टोली बालुवाटार पुग्यो । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएकामध्ये २३५ व्यवसायीहरु एमालेको टीका लगाएर फर्किए । यसरी उद्योगी–व्यवसायीहरु सामूहिकरुपमा...